Hladaewe – Musical Instrument
HLADAEWE CONTACT : 09 421175376, 09 799887049 HLADAEWE Ph: 09 421175376, 09 799887049 Join Us Ph: 09 421175376, 09 799887049 HLADAEWE
What isasound box in Reading?
Elkonin boxes (also known as 'sound boxes') refer toamethod of instruction used to build phonemic awareness in early elementary grade students. Elkonin boxes help to increase reading skills by challenging students to segment words into their individual sounds and syllables.
Why instrumentation is important?
လှဒေဝီတူရိယာဆိုင်ကို 5.6.2008 ခုနစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။စတင်ဖွင့်လှစ်စဉ် ဂစ်တာများကို အဓိကထားရောင်းဝယ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းဖြစ်ဂစ်တာနှင့် ဂျပန်ကျဂစ်တာများ၊ အော်ဂင်များပါရောင်းဝယ်ခဲ့ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဒရမ်များပါ ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ယခုအခါမှာတော့ ဂစ်တာ၊ ကီးဘုတ်၊ ဒရမ်၊ ဂျပန်ကျပစ္စည်းများအပြင်ဆောင်းဘောက်များ၊ အသံချဲစက်အမျိုးမျိုးတို့ကို ရောင်းချနေပါသည်။
Ph: 09 421175376, 09 799887049
ရန်ကင်းစင်တာပထမထပ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Hladaewe Musical Instrument - Copyright 2020. Developed by MM Cities (MMUA).